Diimaa Noggoo : Gaaffiin hedduun akkuma kuufametti itti fufuun yaaddoo jijjiirama kanaati - BBC News Afaan Oromoo
Imalli keenya humnaan osoo hin taane beekumsaa fi ragaa qabatamaadhaan ta'uu qaba jedhan pirezedaantii Saahileworqi Zawudee. Kana kan dubbatan marii paanaalii jijjiirama waggaa tokko keessatti dhufe, rakkoolee mudatanii fi yaaddoowwan gara fuulduraa irratti qophaayeratti.
Haasaa isaanitiinis uummatni nuti horannu kan miiraan oofamuu keessaa bahee yaadan walfalmee walmoo'atu ta'uu qaba jedhan. Ummanni miiran oofamu garuu karaa qaroominaa cufuun alatti beekumsi sabaaf dabarsu hin jiraatu jedhan.
Imala araaraa Itoophiyaa fi Eertiraa wanti gufachiisuu danda'u maali?
Marii kanarrattis hayyoonni dhimmoota ijoo afur irratti xiyyeefachuu akka qaban dhaaman:
Karaan imallu kan biraa nama galu akka hin taane hayyoonni karaa ifa ta'e beekumsarratti hunda'e agarsiisuun hawaasni bal'aanis karaa kana akka qabatan gochuu.
Olaantummaan yaadaa akka baramu gochuu.Kunis barri olaantummaan humnaan argamu xumuramee olaantummaan yaadaa fi beekumsaan qofa akka ta'u gochuu.Kanaafis hayyoonni yaada bilisa ta'e maddisiisuun yaadni bilisaa kunis akka hawaasa keessa babal'atu gochuu qabus jedhan.
Hayyoonni Aadaa marii babal'isuu qabu.Kunis mari'atanii ragaa qabatamaadhaan walfamuu, xinxala bilchaataa dhiheesuun, jeequmsarra marii, hokkorarra nageenya babal'isuuf qoodni hayyootaa guddachuu akka qabu dhaaman.
Aadaan qeeqan walsirreessuu cimuu qaba.Hayyoonni, gaggeesitoonnis ta'e hawaasni bal'aan hanqinoota mul'atan walqeequun akka badii mul'isuun akka sirratu gochuu qabu jedhan.
Hayyoonni dhimmoota ijoo kanarratti bal'inaan gahee isanii baanaan, siyaasni keenya qaroomaa dimikiraasiinis cimaa deema jedhan.
Hojiin aadaa dimokiraasii cimsuu kuni garuu gahee mootummaa qofaan galma kan gahu waan hin taaneef hawaasni hundi gaheesaanii bahuu akka qaban waamicha dhiheessaniiru.
Mariin guyyoota lamaaf turu kunis kallattii biyyattiin fulduratti ittiin deemuu qabdu kan akkeekuu fi galtee imaammataa kan ta'u waan ta'eef hunduu dammaqiinsaan yaada isaa kennee gabbisuu qabas jedhan.
''Sabummaan babal'achuun jijjiirama kanaaf yaaddoodha''
Marii paanaalii mata-duree 'Addis weg' jedhuun qophaa'e kanarratti barreefama kan dhiheessan qorataan siyaas dinagdee Dr Diimaa Noggoo, jijjiirama waggaa tokko kana keessatti dhufeefi jijjiirama amma dura biyyattii keessatti dhufaa turee fi yaaddoolee gara fuula duraa akeekaniiru.
"Ummanni Itoophiyaa ummata cunqursaa fi saamicha obsee jiraachuu danda'udha kanaaf kan bulchitoota kamiifuu mijataa ture" jedhu Dr Diimaan.
Obsee Obsee gaafa gameef wanti waggaa sadan darbe kana mul'ise fulduraafis hamma dhiibbaa obsuu akka hin dandeenye kan akkeeku jedhu.
Jijjiiramni miilana dhufe kuni seenaa jijjirama siyaasaa itoophiyaa keessatti ta'e irraa garagarumaa ijoo akka qabus eeru.
"Jijjiiramni kuni akka kanneen amma duraa jijjiirama siyaasaa addunyaa waliin walqabataa miti. Jijjiiramichi dhiibbaa alaatiin osoo hin taane dhiibbaa keessoo dhaabaatiin kan dhufe waan ta'eef jijjiirama amma duraarra adda.
Kan biraa jijjiiramni kuni waraanaa fi loltuudhaan kan dhufe miti. Kanaafuu jijjiiramni kuni amala haaraa kan qabu." Jechuun garaagarummaa siyaasa duriifi ammaa ibsan.
Yaddoowwan jijjiirama kanaa irratti qabxiilee hedduu kaasaniiru.
"Gaaffiin hedduun kuufameetuma itti fufaa jira, ittigaafatamummaan badii amma duraatiif jiraachuu qabaachuu dhabuun, rakkoon nageenya keessoo fi qaxanaa bahaa isaan ijoodha," jedhan Dr Diimaan.
MM Abiy Ahimad magaalota Ameerikaa sadii daawwachuufi
Dhimmi biyyoolesummaarra sabboonummaa sabummaa leellisuun babalachaa deemuun isaa yaaddoo cimaa jijjirama kanaa akka ta'uu danda'u marii kanarratti kaasan.
"Sabboonummaa sabummaa leellisuun babal'achaa jira. Inni tokko dhiitame, cunqurfame jedhee iyya inni kaan ammoo bakkan amma dura qaburraa bu'e jedha. Sababa kanaan namuu sabummaatti cichaa biyyoolesummaan yaaddoo keessa galaa deema." Jedhan.
Qorataa fi barsiisaan saayinsii siyaasaa Dr. Samiir Yusuuf ammoo dhimmootni jijjiirama kanaaf yaaddoo tahan kan biroos jiru jedhu.
"Jijjiiramni kuni mootummadhaan dhufe. Gaheen dhaabbilee siivilii xiqqaadha. Mootummaan mataasaatti ammoo qaawwa qaba, roadmap ifa ta'e hin qabu.
Kana malees, fedhii dhuunfaa fi murnaa karaa qaxxaamuraatin galmaan gahachuuf deemuunis yaaddoo jijjiirama kanaati. Raafamni dinagdees kanuma keessatti dabalama" jechuun ibsan.
Guyyoota 100: Araarri Itoophiyaa fi Eertiraa qooda nageenya Baha Afriikaaf qabu